CPA VS. Chartered Xisaabiyaha - Which Is Better? [It's A Close Call]
CPA vs CA (Chartered Xisaabiyaha): Waa kuwee waa ka wanaagsan in aad loogu talagalay?
23 Aug CPA vs CA (Chartered Xisaabiyaha): Waa kuwee waa ka wanaagsan in aad loogu talagalay?
Waa kuwee waa ka fiican? Waa kuwee naqshada caawin doonaa mustaqbalkiisa? Marka la go'aaminayo doorashadaada xirfadda in xisaabaad, aad waxaa laga yaabaa in dhibaato ah inta u dhaxaysa CPA ama CA dooran. Su'aasha muhiimka ah in baxaysaa waxay tahay haddii CPA faa'iido aad waddada xirfadda ama CA? Ma jiro guusha cad sababtoo ah labada aqoon kaa caawin doontaa in ay koraan aad xirfado farsamo, xirfadaha xisaabaad iyo xirfadaha maamulka ganacsiga. Sidoo kale, Kooxda heysata CPA iyo CA u dabcaan iney la siman baahsan xisaabaadka ganacsiga iyo dadweynaha - sidaa isreebreebka kasta waxay bixisaa dabacsanaan ugu badnaan in ay ka shaqeeyaan guud ahaan warshadaha. Aynu eegno waxa kasta oo lagu caddeyn kuwaas wuxu iyo farqi weyn oo u dhexeeya labada.
Waa maxay CPA ah?
Waa maxay CA a?
CPA vs CA: Jidka Career
CPA vs CA: mushaaraadka
CPA vs CA: Shuruudaha Time
CPA vs CA: Kharashka Certification iyo Shuruudaha
A Certified Public Accounting waa xirfadle qaba gudbay imtixaanka CPA ah siiyo by Machadka American ee Certified Public xisaabaadka (AICPA) iyo dhammaan shuruudaha waxbarashada iyo waayo-aragnimo shaqada la xidhiidha qaadashada imtixaanka oofiyey. xirfadlayaasha Kuwanu waa khubarada Maraykanka GAAP, US canshuurta dakhliga ee dawladda dhexe, iyo dhowr meelood oo kale oo xisaabaadka Mareykanka iyo sharciga dhaqaale sida hanti dhowrka. Inkasta oo shahaado this la ixtiraamo oo adduunka ah, waa naqshada Maraykan ah oo caddeynaya in xirfadeed waa awoodda xisaabinta Maraykanka oo ay awoodaan in ay qabtaan hawlaha hanti dhawrka iyo canshuuraha in xirfadlayaasha kale looma ogola inay sameeyaan.
A Chartered Xisaabiyaha (CA) waa qof xirfadle ah ayaa gudbay imtixaanka CA iyo waxbarashada loo baahan yahay in isaga ama iyada dalka shahaadada. Waxaa jira ururo badan oo bixiya waxbarashada iyo imtixaanka CAS. A dhowr tusaale ka mid ah Institute of Chartered ee Scotland (ICAS), Institute of Chartered ee England iyo Wales (ICAEW), Institute of Chartered of India (Ichhai) iyo Machadka Canadian ah ee Chartered (CICA.) Xisaabaadka Chartered ee Kanada, Australia, New Zealand, Mexico iyo Ireland heshiis is waydaarsiga la Maraykanka. Haddii ay u gudbin kartaa imtixaanka u dhiganta ah, waxay ka shaqayn kartaa in laga xoreeyo dalka ah. sida CPAs. CAS waa khubaro ku IFRS iyo heerarka kale ee xisaabinta caalamiga ah. In kastoo ay leeyihiin waxaa laga yaabaa in si wanaagsan u guranayaan on US GAAP, ay sida aan loo tababaray in goobtan sida CPAs yihiin.
Doorshadan CPA ayaa u bilaabmi doona wax badan oo ka mid ah fursadaha xirfadaha kuu. Ka dib markaad hesho shahaado CPA aad shaqayn karto hoos beeraha xisaabaadka kala duwan sida International Accounting, Gudaha & Baarista dibadda, La tashiga Services, Accounting Forensic, adeegyada Hubinta, Taxation & Qorshaynta Financial iwm. Iyada oo ay aqoonsi caalami ah, waxaad ka heli doontaa meesha ugu fiican in ay ka shaqeeyaan meel kasta oo dalal badan. Sidoo kale, Qoondeeyey CA sidoo kale ku siin doonaa fursado badan ee meelaha gaarka ah ee Accounting sida Baarista, Taxation, Maaliyadda Corporate, Law Corporate. Ka dib markaad hesho Certification CA mid awooddo inaad shaqo ku jira shirkadaha sare ee Xisaabaadka ama waxa aad bilaabi kartaa xirfad madax banaan adiga ku gaar ah.
Labada CPAs iyo mushaaraadka CAS ku xiran tahay meesha aad ku juqraafi, horyaalka shaqo, oo sano oo khibrad ah. Sayidka, ay si wayn kala duwan. Mushaharka dhexdhexaadka for CPA ah in laga xoreeyo dalka ah. waa $62,410 iyo mushaarka dhexfurka waayo, CA ah U.K ah. waa £ 34.637 ($44,849 USD). Labada caddeyn leeyihiin mushahar dhaqdhaqaaqa intii ka weyn iyo mid kasta oo ka dhigi kara $150,000 ama in ka badan sannad kasta ku xiran tahay booska iyo heerka waayo-aragnimo.
Waa wax yar ka badan toos ah si ay u noqdaan CPA ah marka la eego shuruudaha waqti. Waa in aad ayaa dhameystirtay 150 saacadood credit undergraduate iyo waa in aad sidoo kale soo shaqeeyay dhowr ah oo la siin saacadaha iyada oo ay kormeerayaan si toos ah CPA ah. ka dibna aad leedahay 18 bilood in uu fadhiisan waayo oo dhan u gudbin afar qeybo ka mid ah imtixaanka CPA ah. Sidaas, waxa uu dhici karaa oo ku saabsan 8 1/2 sano inuu noqdo CPA ah (shan sano oo shaqo undergraduate, labadii sano ee shaqada iyo 18 bilood in ay gudbaan imtixaanka CPA ah). Mudo intee leeg ayay qaadataa si ay u noqdaan CA ah ku xiran tahay waxa dalka aad qorshaynayso in ay ku dhaqmaan in iyo heerka waxbarasho iyo waayo-aragnimo xirfadeed aad. Tusaale ahaan, ICAS uu leeyahay afar doorasho:
wadada entry Direct dugsiga-Codsedeyaalka, taas oo u baahan shan sannadood oo tababar la-shaqeeye ICAS-ansixiyey;
wadada entry Graduate for qalin-jabiyayaasha jaamacadaha, taas oo u baahan saddex sano oo tababar la-shaqeeye ICAS-ansixiyey;
wadada entry Professional ee xirfadlayaasha la kulmay maaliyadda waa for xirfadlayaasha aasaasay leh shahaado jaamacadeed (si rasmi ah u aqoonsaday dhiganta a UK) ama shan sano oo waayo aragnimo shaqo ku habboon iyo
wadada wadooyinka oo kuu ogolaanaya in xubno ka tirsan Institute Chartered The Maaliyadda Guud iyo Xisaabaadka (CIPFA) fursad ay xubin ka mid ah ICAS noqday iyo kasban naqshada CA.
Waxaa jira laba Wadiiqooyinka; mid cabiraya khibrad ku habboon oo kale ah, aqoonta ku ool ah. Labada wadooyinka u baahan yihiin toddoba sannadood oo waayo-aragnimo post-isreebreebka. The ugu fiican "tufaax-to-tufaax" barbardhigo noqon lahaa Tubta CPA = ICAS #2.
Sidee inta ay kukacayaan si aad u hesho liisanka CPA waa variable. Dhammaan dowlad-goboleedyada u baahan tahay in aad shaqaysato ugu yaraan shahaadada bachelor ah ee xisaabinta ama ganacsi la oo ay ku jiraan tiro ka mid ah koorsooyinka loo baahan yahay. Ku dhawaad ​​gobolada oo dhan waxay u baahan yihiin in aad shaqaysato ugu yaraan 150 saacadood credit sidoo. Sayidka, aad CPA waxbarasho u baahan tahay kala duwan ku xeran tahay haddii aad u eryan shahaadada Masterka ee si ay u helaan aad ee la soo dhaafay 25 saacadood credit college ama si fudud u qaataan fasalo dheeraad ah ee aad barnaamijka shahaadada undergraduate. habka shahaado laftiisa ku kici doonaa oo ku saabsan $3,000 oo ay ku jiraan a Dabcan dib u eegis CPA habboon iyo lacagta imtixaanka. Ka dib markii aad noqotay imtixaanka, waxa kale oo aad u baahan doontaa in aad liisan ansax ah la sii credits waxbarashada sannad kasta. Kuwani waxay ku kala duwan yihiin qiimaha, laakiin inta badan ku kici u dhexeeya $50-$100 per credit saac. Gobolada intooda badan ku wareegsan u baahan 40 dhibcood sanadkii. Ha ka welwelin in kastoo. Haddii aad shaqo u hesho at shirkad xisaabaadka Dawladda, waxay bixinayaan wax aad waxbarashada sii wadaan.
Qiimaha for noqday CA waxay ku xiran tahay dalka aad ku nooshahay, aad waayo-aragnimo waxbarasho iyo shaqo iyo waxa ururka oo aad u codsaneysid in loo helo shahaadadaada.
Tusaale ahaan, haddii aad codsanayso in ICAS oo aad doorato Pathways #1 iyo #2 (toos galo dugsiga ama jaamacadda) ka dibna aad u shaqayso dabooli doonaa kharashka. Haddii aad doorato Pathway #3 (khibrad Professional), kharashka waa qiyaas ahaan £ 5,750 - £ 13,900. Tubta #4 (xubnaha CIPFA) kharashka waa £ 1.035 for Pathway ah Khabiirro xariirayo. Waayo, Pathway Aqoon la taaban karo, kharashka waa: £ 596 qandaraas tababarka; £ 1.547 - £ 1.935 lacagta fasalka; £ 292 lacag imtixaanka iyo £ 495, waayo uruka shaqaalaha ee sannadlaha ah xubin ICAS / CIPFA. Haddii ay jiraan sii shuruudaha waxbarashada iyo licensing, waxay la go'aamin doonaa dalka aad ka shaqaynayaan.
Haddii aad xiisaynayso in dibada laga shaqeeyo ama shirkad caalami, markaa waa in aad doorato CPA. Waxa aad war dheeraad ah oo ku saabsan baran kartaa koorsooyinka ugu fiican udiyaar CPA halkan. Haddii kale, haddii aad rabto in aad bilowdo adiga kuu gaar ah hubinta dhaqanka ee India, doorato CA. Intaa waxaa dheer, imtixaanka CA waa ka kharash yar marka loo eego ku baaritaan CPA ah. Midkoodna mid ka mid ah caddeyn, kuwaas oo ka khayr badan oo kale oo ku. Waxay si fudud u kala duwan oo loo isticmaalo ujeeddooyin kala duwan yihiin. Waxaad filan kartaa in la sameeyo oo ku saabsan mushahar isku mid ah labada aqoonsiga la siiyey in goobta, shaqo, shirkadda, iyo waayo-aragnimada shaqo waa isku mid. run ahaantii waxa hoos si waxa aad rabto in aad sameyn lahayd iyo meesha aad rabto in ay ka shaqeeyaan. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Diyaar. Set. Crush It.
CPA Dib u Eegidda Koorsada Isbarbar
Best Review CPA Koorsooyinka ah 2018 464 comments
Iska yaree Your Exam CPA Time Study By 116 Saacadaha! 232 comments
Waa kuwee Section Of Exam CPA ayaa Miyaan Qaado First? 203 comments
CPA Hab-Arjiga Imtixaanka 127 comments
CPA, Roger CPA Review, dhimista Exclusive, dhimista Deep 36 isticmaalaa maanta
CPA 35 isticmaalaa maanta
Save $700 off on this stellar review course with this Roger CPA Premier promo code. Thanks to khudbado uu ku hawlanaa, Dabcan waxa uu ahaa caadiga ah ka mid ah warshadaha ee muddo sanado ah, waana wax walba idinkaa leh, waayo, in our code sicir-dhimis Roger CPA mahad yar. Iyada oo kayd ah, kuwaas oo, waxaa jira wax ay lumiso, si ay isticmaalaan coupon Roger CPA iyo aad u hesho barashada maanta.
CPA, Surgent CPA Review, dhimista Exclusive 38 isticmaalaa maanta
CPA 38 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 38 minutes ago
Taariikhda uu dhacayo: October 24, 2018
CPA, Wiley CPAexcel, dhimista Exclusive 41 isticmaalaa maanta
CPA 41 isticmaalaa maanta
Save $367.50 la our Wiley CPA coupon on the Wiley Platinum CPAexcel course
Last isticmaalay 16 seconds ago
October Sale! Save $800 waxaan Surgent CPA First Pass. Hurry offer ends soon!
CPA, Surgent CPA Review, dhimista Exclusive 37 isticmaalaa maanta
CPA 34 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 2 minutes ago
Save $500 ama 20% la Platinum Wiley CPAexcel
CPA, Wiley CPAexcel, Ugu deeq u Gaarka ah 37 isticmaalaa maanta
Save $500 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Platinum CPAexcel course. Badbaadi lacagta aad ku Dabcan weyn maanta to our code promo Wiley ee koorsada Platinum CPA Review mahad. *dalab Tani ma lagu dari karaa qiimo dhimis kale. See Wiley\_’s website for full details and exclusions.
Taariikhda uu dhacayo: October 22, 2018
CPA, Roger CPA Review, dhimista Exclusive 35 isticmaalaa maanta
qaado $700 off, making Roger CPA’s Elite course the same price as their Premier course! Act fast this offer won’t come around again anytime soon. Eeg bogga internetka ee Roger CPA ee faahfaahin buuxda iyo xayiraad.
Taariikhda uu dhacayo: October 21, 2018
SAVE $500! Surgent CPA Review Premier dhimista
CPA, Surgent CPA Review, dhimista Deep 41 isticmaalaa maanta
CPA 36 isticmaalaa maanta
Isticmaal burburi ee gaar ah $500 Surgent CPA code coupon si aad u hesho heshiiska ugu wanaagsan ee la heli karo on Surgent CPA Review ee Premier Course. Save the lacag this Surgent code sicir-dhimis iyo aad u bilowdo on haatan daraaseynaysa. Sheegashada aad code coupon Surgent haatan iyo maanta bilaabayso safarka CPA!
Last isticmaalay 4 minutes ago
RATING SARAYSA: ★★★★ ★
CPA, dhimista Exclusive, Fast Forward Academy 35 isticmaalaa maanta
CPA, Ugu deeq u Gaarka ah, Burburin CPA The 34 isticmaalaa maanta
Taariikhda uu dhacayo: October 25, 2018
CPA, Roger CPA Review, dhimista Deep 36 isticmaalaa maanta
CPA 40 isticmaalaa maanta
qaado 20% off Roger CPA Review Audio Course muddo kooban la this burburi gaar The code coupon CPA. Eeg bogga internetka ee Roger CPA ee faahfaahin buuxda iyo xayiraad.
SAVE 20% – Roger CPA Review – Fresh Start Gaarka ah
CPA, Roger CPA Review, dhimista Deep 35 isticmaalaa maanta
qaado 20% off off a one-time purchase of Roger CPA Review Courses & Product. Eeg bogga internetka ee Roger CPA ee faahfaahin buuxda iyo xayiraad.
qaado 20% off Roger CPA Review Cram Course muddo kooban la this burburi gaar The code coupon CPA. Eeg bogga internetka ee Roger CPA ee faahfaahin buuxda iyo xayiraad.
CPA, Yaeger CPA Review, dhimista Exclusive 40 isticmaalaa maanta
CPA 33 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 6 minutes ago
Gryfin CPA Cram Course-dhimista
CPA, Gryfina, dhimista Exclusive 41 isticmaalaa maanta
CPA 37 isticmaalaa maanta
Hel 15% off the Gryfin CPA Cram Course with our great discount code. Haddii aad raadineyso weeyna qaar ka mid ah qalabka waxbarasho dheeraad ah qaybta imtixaanka CPA kasta, dhigi maalgashiga ee Course Gryfin CPA Cram si aad u hubiso inaad ku gudubto!
Last isticmaalay 12 minutes ago
Taariikhda uu dhacayo: October 27, 2018
Gleim CPA Premium Review Course Discount – Save $200 ama 10%
CPA, Gleim CPA Review, dhimista Exclusive 37 isticmaalaa maanta
Save $200 with our Gleim CPA Premium Course discount and get an awesome deal on a proven course. You’ll have more money for exam fees and anything you need to help you get through the studying process when you use our Gleim discount link. hadda iibso iyo aad u hesho maanta bilaabay!
Last isticmaalay 57 seconds ago
Wiley Gold CPAexcel dhimista Code
CPA, Wiley CPAexcel, dhimista Exclusive 35 isticmaalaa maanta
Save $277.50 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Gold CPAexcel course. Badbaadi lacagta aad ku Dabcan weyn maanta to our code promo Wiley ee koorsada Gold CPA Review mahad.
Last isticmaalay 16 minutes ago
Helay Exam CPA Su'aalaha? Hel Jawaabaha!
CPA, Surgent CPA Review, lagacna 40 isticmaalaa maanta
Ku biir taxane lagacna live Surgent si ay u bartaan oo dhan oo ku saabsan imtixaanka CPA ah:
2018 CPA Exam Isbedelada
Sida loo Xalliyaan a Research Jilidda Su'aasha
Hel Points Most On Your Su'aalaha BEC Written Isgaarsiinta
Ku biir lagacna
Taariikhda uu dhacayo: October 29, 2018
Roger CPA Maalgelinta bandhigidda
CPA, Roger CPA Review, U bandhigidda maalgelinta 40 isticmaalaa maanta
Waayo, $183 bil ah, waxaad ka heli kartaa Dabcan dib u eegis Roger CPA la qorshe maalgelinta la awoodi karo. Don’t hesitate—start studying for the CPA exam now thanks to this great Roger CPA financing deal.
HELI maalgelinta NOW
Last isticmaalay 10 minutes ago
been CPA 0% maalgelinta
CPA, Surgent CPA Review, U bandhigidda maalgelinta 33 isticmaalaa maanta
Thanks to this been ah 0% heshiiska maalgelinta, aad xoogaa gargaar ah la Dabcan dib u eegis CPA weyn ka heli kartaa . Waayo, kaliya $49, waxaad bilaabi kartaa waxbarashada maanta. in this Surgent maalgelinta dalab mahad. Ha hakad-aad safarka CPA sugnaaday!
Surgent CPA 5-Day bandhigidda Trial FREE
CPA, Surgent CPA Review, Trial Free 41 isticmaalaa maanta
Eeg waxa Crore oo dhan waa ku saabsan naftaada. Imtixaanka eryi koorsada Surgent CPA Review hore 5 maalmood si buuxda oo lacag la'aan ah. Maxay yihiin hadalladan aad sugayso? Iska bilaabay maanta!
BILOW AAD DHAGAYSIGA FREE
Last isticmaalay 13 minutes ago
CPA, Roger CPA Review, kale 39 isticmaalaa maanta
Hel ilaa $800 & 30% off Kuwan codes weyn coupon Roger CPA si ay u bilaabaan barashada waayo, maanta yar! Waxaad u qalmi kartaa Xeerasha Roger CPA rasmiga ah Promo, sida Billow Cusub, shirkad, ardayga, and Newsletter discounts.
TUS TODDOBAADKA promos
CPA, Wiley CPAexcel, kale 36 isticmaalaa maanta
Hel ilaa $500 off on koorsadan in codes loo iibiyay Wiley CPA mahad gaar ah u bixiyeen burburi. Wiley CPAexcel ee Flashsale Isbuuca waa fursad si aad u bilowdo barashada maanta. Hubi goobta Wiley ee si aad u aragto haddii ay ordaya kasta oo qiimo dhimis gaar ah!
Last isticmaalay 7 seconds ago
Wiley Silver CPAexcel dhimista Code
CPA, Wiley CPAexcel, dhimista Exclusive 39 isticmaalaa maanta
Save $255.00 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Silver CPAexcel course. Badbaadi lacagta aad ku Dabcan weyn maanta to our code promo Wiley ee koorsada Silver CPA Review mahad.